Wararka - Dayrta
Dayrta! Saamaynta xadidida awooda ayaa soo muuqata
Korontada raashinka ee dalka oo dhan ayaa nolosha ka dhigtay mid aad u liidata warshado badan oo wax soo saar leh.” Dahab sagaal qalin ah, ayaa had iyo jeer ahaa wax soo saarka amarada ganacsi ee ugu sarreeya. Waqtigaan lama filaan ah "korontadda raashinka", shaki kuma jiro dad badan oo aan diyaarsaneyn.
"Korantada qiimaha" ayaa ku fiday dalka, shirkado badan oo wax soo saarka caag ah ayaa si adag u saameeyay.
Tusaale ahaan shirkadaha wax soo saarka balaastikada ah, shirkadaha wax soo saarka balaastikada ee gobolo kala duwan, "korontada rashiinka" waa ka duwan yahay, laakiin "labada maalmood ee furan waxay istaagaan shan maalmood, afar maalmood oo furan laba maalmood" waa mid aad u badan. Dhawaan, tusaale ahaan, gobolka Zhejiang ayaa mar kale furay barnaamijka xaddidaadda wax soo saarka iyo awoodda, iyada oo la fulinayo istaraatiijiyadda "furitaanka afar maalmood iyo joojinta laba maalmood".
"Korantada raashinka ah", shirkado badan ayaa si cad u diyaarsan. Ma aha oo kaliya shirkadaha caadiga ah kuwa aan diyaarsanayn, laakiin sidoo kale shirkadaha liiska ku jira ee ay si adag u saamaysay "korontada".
Korontadu waxay dejisay falcelinta silsiladda taas oo alaabta ceeriin ay kor u kacday
"Korantada raashinka" imaatinka shirkado badan oo wax soo saar caag ah ayaa riixaya "furaha hoos u dhaca" Laakiin dhibaatadu ma aha oo kaliya awoodda xaddidan, laakiin sidoo kale kor u kaca alaabta ceeriin.
Waxaa la fahamsan yahay in shirkaduhu ay heleen ogeysiis ku saabsan joojinta korontada ka dib fasaxa maalinta qaranka, taas oo ah in la yiraahdo, labada bilood ee ugu dambeeya sanadka, xaaladda xaddidan ee labalaabka ah ayaa noqon doonta mid aad u adag, heerka isticmaalka shirkadaha kiimikada ayaa noqon doona mid aad u adag. Haddi ay tahay sahayda dhuxusha dhamaadka isha, ama suuqa hoose ee ay keentay xadka wax soo saarka iyo heerka isticmaalka hooseeya ee joogtada ah, waxa ay dilaan shirkadaha wax soo saarka caaga ah.
Qiimaha kor u kaca, shirkadaha wax soo saarka caaggu waxay dooran karaan oo kaliya inay kordhiyaan qiimaha habka loogu wareejinayo cadaadiska dhinaca hoose, "is-caawinta" Tan iyo bishii Oktoobar, xawaaraha korodhka qiimaha ganacsigu ma joogsan, shirkadaha qaar ayaa xitaa xasuusiya macaamiisha. si loo xaqiijiyo in uu jiro kayd iyo wareegtada kaydka ka hor inta aan la iibsan.
Waxaa xusid mudan in ay sabab u tahay xoojinta awoodda wax soo saarka saarayaasha alaabta ceeriin kor, faa'iidada qaraabo, in wejiga hoos u sii dheeraaday, ku xidhan tahay in ay dejiyaan kor u kacay qiimaha.In dhexda iyo hoose ee shirkadaha wax soo saarka, ay sabab u tahay. tirada badan, iyo gobolka baahinta, in wejiga kor u kaca qiimaha alaabta ceeriin, kaliya si dadban u aqbali karaa, ka dibna lagu qasbay in ay u gudbiyaan kharashka wax soo saarka si ay dhamaadka macaamiisha. La yaab ma leh in badan oo gudaha qaylinaya: qiimaha kor u kaca, diyaarinta hore ee nafsaaniga ah. .
Qiimaha alaabta ceeriin ayaa kor u kacay warqad aad u weyn, dadku ma diyaar garoobin!
Saddex dhibaato oo waaweyn: korontada, alaabta, dadka
"Korantada raashiinka", badi shirkadaha wax soo saarka caaggu waxay ku mashquulsan yihiin saddex dhibaato: koronto, alaab, dad.
Masuulka ka tirsan shirkadaha dhexdhexaadka ah ee wax soo saarka caagadaha ayaa sheegay in warshaddiisu ay caadi ahaan soo saarto 1 milyan oo koob oo caag ah maalintii, isla markaana ay joojiso wax soo saarka muddo 10 maalmood ah. Marka laga soo tago khasaaraha dhaqaale ee ku dhawaad ​​6 milyan yuan, waxa kale oo uu la kulmaa dhibaatada ah sida loogu sharxo macaamiisha.” Macaamiisha ajaanibka ah qaarkood ayaa wacay si ay wax uga waydiiyaan dalabaadkooda, laakiin wax jawaab ah kamaanu helin. Waxaan u baahanahay inaan sugno oo aan aragno laba maalmood oo kale. Haddii amarka la keeni waayo, hubaal waanu bixin doonaa."
Mid ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga, oo u shaqeeya in ka badan 1,300 oo qof, ayaa yiri: "Macaamiishu way dhimanayaan, laakiin amarrada ayaa la buuxiyey kala badh. macmiilka ayaa wacay oo noo sheegay inaan degdegno 10 maalmood, shirkado badan oo hubaal ah ma bixin karaan. Sannadkan alaabta ceeriin, xamuulka badda ayaa kor u kacaya qiimaha, asal ahaan xitaa jabin kara, hadda khasaare badan.
Marka la xidho, milkiilayaasha ganacsigu waxa ay ka walaacsan yihiin in ay lumiyaan fursadaha suuqa ogeysiis, amarada degdega ah waanu qabanaa, si tartiib tartiib ah uma qabsano, faa'iido yar ma aqbalno. Ugu yaraan na sii wakhti yar. "Mid ka mid ah milkiilayaasha ganacsiga ayaa ka cawday.
Waqtigan xaadirka ah, tiro badan oo shaqaale ah oo ka shaqeeya shirkado kala duwan ayaa sugaya, "si la mid ah sanadka cusub ee Shiinaha", qaar badanna waxay ku dilaan waqtiyada qolka jiifka." Haddii aynaan bilaabin wax soo saarka, dakhliga soo gala ayaa aad u yar. Waxaan rajeyneynaa inaan dib u bilowno wax soo saarka.” "Mid ka mid ah shaqaalaha ayaa yiri.
Milkiilayaasha ganacsiyadu aad bay u hubin in ay tahay in ay joojiyaan wax soo saarka muddo 10 maalmood ah, markaa shaqaaluhu ma qaataan fasax dheer ama wax kale? Ma joojin doontaa maalmo yar oo kaliya ka dibna si caadi ah ayey u shaqeeyaan? Waxay ka welwelaan haddii ay qaataan fasax dheer, shaqaalaha waxaa laga yaabaa inay ku qasbanaadaan inay guryahooda aadaan, wax soo saarkuna wuu carqaladayn karaa markay soo noqdaan.
Marka loo eego "xakamaynta awoodda", dhibaatada shaqo la'aanta shirkadaha ayaa sidoo kale la muujiyay. Sababtoo ah cudurka faafa, tirada shaqaalaha ee Fujian, Jiangsu, Guangdong iyo meelo kale ayaa si weyn loo dhimay. Hadda, shaqaale badan ayaan si fudud u bixin marka ay la kulmaan koronto go'an, goyn wax soo saar iyo fasaxyada warshadda. Sida laga soo xigtay mas'uulka ku shaqada leh, farqiga shaqo ee shirkaddu waa mid aad u weyn. Tanina mar walba waa dhacdaa.
Wax ka qabso "korontada raashinka" talooyinka wax ku oolka ah:
Soo bandhigida "korontada raashinka" waxay samaysay shirkado badan oo aan awoodin in ay la qabsadaan, ilaa xad, waxay carqaladeeyeen qorshaha wax soo saarka asalka ah. Sidee loola macaamilaa isbeddelkan? u sheegay Maareynta Sinoforeign in muddada gaaban, shirkaduhu waa inay si fiican u eegaan qorshayaashooda dalabka iyo qorshooyinka wax iibsiga, dib-u-hagaajinta xawliga wax-soo-saarkooda si waafaqsan "amarka mugdiga", oo ay fiiro gaar ah u yeeshaan xiriirka alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha. Muddada dhexe, Amniga sahayda tamarta wuxuu u baahan yahay in lagu dhex daro qorshaha guud ee horumarinta shirkadaha, iyo qaar ka mid ah mashaariicda ilaalinta tamarta iyo tamarta cusub waa in la bilaabo si loo hagaajiyo heerka waxtarka tamarta sida ugu badan ee suurtogalka ah oo loo soo saaro qiimo dhaqaale oo badan oo leh isticmaalka tamarta hoose. , ganacsiyadu waa inay u beddelaan cagaar, kaarboon-hooseeya iyo qaab wax soo saar wareeg ah, yareeyaan isticmaalka tamarta iyo ca qiiqa rbon halkii badeeco ama adeeg, oo ku dadaal in aad noqoto hogaamiyaha kaarboon-cagaaran ee cagaarka ah ee warshadaha iyada oo la adeegsanayo hal-abuurnimada ganacsiga, hal-abuurka moodeelka iyo hal-abuurka sayniska iyo tignoolajiyada, si loo helo xuquuqo horumarineed oo badan iyo meel bannaan.
Gaar ahaan, Tan Xiaoshi, oo ah maamulaha Xarunta Cilmi-baarista Ilaalinta Tamarta iyo Horumarinta Cagaarka ee Shiinaha Shipbuilding 714 Institute Research, ayaa soo jeediyay:
Marka hore, shirkaduhu waxay samayn karaan kooxo jawaab celin ah si ay u dhisaan Buundooyin leh waaxyo dawladeed. Diirada saar xaqiijinta qorshaha xaddidaadda awoodda, muddada xaddidaadda awoodda, iyo liiska caddaynta ee shirkadaha xaddidaadda awoodda.
Marka labaad, waxaanu dejin doonaa qorshayaasha tamarta iyo hagaajinta awooda.”Shirkaduhu waxay samayn karaan qorshooyin koronto iyagoo kiraysanaya matoorayaal, iibsanaya matoorrada laftooda, iyo rakibaadda nidaamyada cadceedda. Isla markaa, iyada oo lagu salaynayo qorshaha kabka tamarta, qorshaha xaddidka awoodda, dejinta Qorshaha hagaajinta awoodda, hagaajinta nidaamka xaadirinta qorshaynta gaarka ah, hawl-wadeennada si ay ula qabsadaan tallaabooyinka ku-meel-gaadhka ah, tallaabooyinka ilaalinta dambe, iyada oo loo marayo wax-soo-saarka ugu sarreeya iyo wareejinta, si buuxda u isticmaalaan habaynnada wax-soo-saarka usbuuca iyo habeenka, hagaajinta hufnaanta maareynta kheyraadka aadanaha."
Saddexaad, hagaajinta barnaamijka qiimaynta macaamiisha.Iyada oo ku saleysan natiijooyinka qiimeynta, waxaan mudnaanta siin doonaa bixinta alaabada tayada sare leh ee macaamiisha, baabi'inta alaabooyinka tayada hooseeya ee macaamiisha, iyo kordhinta iibka alaabta iyo saameynta soo kabashada qiimaha.
Isla mar ahaantaana, Tan xiaoshi wuxuu sheegay in habka ugu dambeeya ee lagu xallin karo dhibaatada ganacsigu ay tahay "in la wanaajiyo qaabka warshadaha iyo qaab dhismeedka nidaamka, baabi'inta tignoolajiyada iyo awoodda dib u dhaca." Iyadoo la hubinayo tayada badeecada, shirkaduhu waa inay yareeyaan kharashka wax soo saarka. iyada oo mabda'a ah il furan, la yareeyo isticmaalka, kaydinta tamarta iyo kordhinta waxtarka, waxaan si wanaagsan uga faa'iideysan doonaa tamarta cusub iyo hal-abuurka tignoolajiyada waxaanan dejin doonaa qorshooyinka badbaadinta tamarta, dhimista isticmaalka iyo isbeddelka cagaaran ee kaarboon-yar.
Waqtiga boostada: Oct-18-2021